Elektaroniga | Hangzhou Zkong Networks Co., Ltd.
Calaamadaha Elektiroonigga ah (ESL)
Kala fidiyay LCD
Dukaamada alaabada dhijitaalka ah, qiimaha cutubka sare iyo faahfaahinta wax soo saarka oo aan ku filnayn ayaa had iyo jeer caqabad weyn ku ah wax soo iibsiga goobta.
Calaamada Elektaroonigga ah ee loo yaqaan 'shelf shelf Label' (ESL) waa tallaabo noocan oo kale ah oo horumar leh oo milkiileyaasha dukaanku ay ku muujinayaan kuna muujinayaan qeexitaanno badan ilbiriqsiyo gudahood. Waana wax aad ugu habboon macaamiisha inay doortaan oo ka iibsadaan moodello isku mid ah oo shaqooyin kala duwan leh.
Waxay u noqon doontaa safar raaxo leh macaamiisha markay heli karaan faahfaahinta wax soo saarka ee ku filan iyo faa'iidooyinka qarsoon ee loo maro ESLs, oo ay ku xaqiijiyaan waxa ay dhab ahaan ugu baahan yihiin habka iibsiga oo gaagaaban.
Barnaamijyadeenna ESL-yada ayaa diyaar u ah in loo adeegsado tiknoolajiyada Bluetooth iyo NFC, qaab dhammaystiran oo muuqaal ah, iyo muuqaal saddex-midab leh. Marka laga reebo soo bandhigida faahfaahinta sheyga sida qiimaha ...
Cinwaanka: Dhismaha Lambarka 17, Singapore Tech Park, Hangzhou